Mohamed ElGohary, Folo taona tato amin’ny GV: Ny dikan-teniko voalohany sy eritreritra hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2019 3:11 GMT
Nopaingorin'i Gabriela Garcia Calderon
Tsy mino aho fa folo taona izao. Nandray anjara tamin'ny Global Voices ho mpandika teny Arabo aho tamin'ny febroary 2009. Tamin'izay fotoana izay, dia bilaogera amin'ny fiteny roa aho, nanoratra momba ny raharaha Ejiptiana sy ny web2.0. Mbola mpianatra, na dia manana asa an-tserasera tapak'andro aza, nanana fotoana ampy tamin'ny fandraisako anjara amin'ny maha-mpandika teny aho. Tamin'izany fotoana izany, dia tsy nanana traikefa betsaka tamin'ny fandikan-teny aho, fa mamaky teny betsaka amin'ny fiteny roa. Yazan Badran no tonian-dahatsoratra nandray ahy tato amin'ny Global Voices, angamba fifandraisana voalohany tena izy tamin'ny Syriana. Niana-javatra betsaka avy amin'i Yazan aho, na momba ny fiteny na ny fomba fanekena ny fanovana amin'ny lahatsoratro.
Ny fandikan-teny voalohany nataoko dia momba an'i Gaza. Talohan'ny Global Voices, Palestina ihany no hany zavatra novakiako tao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, ary tsy ho fantatrao velively ny antsipiriany momba ny fifandirana avy amin'ny tatitry ny fampahalalam-baovao mahazatra. Nafohezina tamin'ny tarehimarika fotsiny izy ireo. Tamin'ny alàlan'ny Global Voices no nahafantarako fa manana ny olony ny fifandonana rehetra, ​​manana ny fiainany manokana, ny fahatsiarovana, ny fahasambarana ary ny fanaintainana ny tsirairay, ary mety ho fantatrao na tsy mety ho fantatrao ny zavatra tsapany, na dia ho an'ny ankizin'ny kolontsaina faha-telo tahaka ahy aza.
Nanome toky ny amin'izay noeritreretiko ilàna tambajotra ao amin'ny faritra MENA, mihitatra avy any Ejipta ny Global Voices. Taorian'ny nanombohako nibilaogy tamin'ny taona 2006, nandany ampahany betsaka tamin'ny fifaneraserana tamin'ireo bilaogera Ejipsiana aho, izay nahatratra an'aliny ny isan'ireo bilaogera. Saingy rehefa nanatevin-daharana ny Global Voices aho, dia nahita zavatra teo amin'ireo Ejipsiana izay itovizanay amin'ny namana Amerikana (amin'ny salan'isa): Tsy mahalala na inona na inona momba ny ambin'izao tontolo izao izahay. Na eo amin'ireo manam-pahaizana aza, sarotra ny mahafantatra olona manaraka ny raharaha Sodaney, Syria, na Maoritania. Manakana anay tsy hifandray amin'ireo mpikatroka eo an-toerana ny hevi-draikitra mikasika an'ny Golfa sy ny solitaniny. Raha ny filan-kevitry ny minisitry ny atitany Arabo no fandaminana mahomby indrindra, nokarakaraina hanoherana ireo mpikatroka arabo.
Nanamafy ny fomba fijeriko momba ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana, ny fiaraha-miasa ary ny fifanakalozana ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices, fiarahamonina tena ahitana ny karazan'olona manerana izao tontolo izao, ary tsy hijanona amin'ny fahanginana. Maniry ny fahefana rehetra ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices aho, mba hahafahana mametraka izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa. Te-hisaotra ny mpikambana GV rehetra nihaona tamiko aho, satria isaky ny tonga izany, dia nahafantatra zava-baovao aho, ary zavatra tena sarobidy amiko izany.
Fiarahamiasa avy amin'i Chris Lott